Ifandroritan’ny CUA sy ny distrika… : mbola ampiasaina amin’ny taratasy ny logo-n’ny kaominina | NewsMada
Ifandroritan’ny CUA sy ny distrika… : mbola ampiasaina amin’ny taratasy ny logo-n’ny kaominina
Nisy ny fivoriana nataon’ny mpitantana ny kaominina sy ny sefo fokontany eto Antananarivo Renivohitra, omaly. Fototry ny fihaonana ny didy navoakan’ny distrika mikasika ny tsy tokony ampiasain’ny fokontany intsony ny logo-n’ny kaominina Antananarivo Renivohitra amin’ny taratasy rehetra kirakiraina manomboka izao. Andraikitra sy fahefan’ny kaominina Antananarivo no antony ampiasaina azy ireny eny anivon’ny fokontany. Rariny raha misy ny famantarana avy amin’ny kaominina Antananarivo, indrindra ireo taratasy toy ny kopia, fanamarinam-ponenana, sora-piankohonana, ny fametahana ny saina… raha ny tatitra nataon’ny lefitra faharoan’ny ben’ny Tanànan’Antananarivo, Randriamorasata Julien, omaly. Araka ny lalàna voasoratra, manan-kery ny fampiasana azy ireny.
Noho izany, niangavy ny kaominina Antananarivo Renivohitra mba tsy hanalana ny famantarana rehetra eo amin’ny taratasy sy ny sainan’ny kaominina eo anivon’ny fokontany, ka mila tohizana ny asa satria an’ny kaominina avokoa ny 90% -n’ny asa.
Ny herinandro lasa teo, nisy baiko midina am-bava amin’ny fanesorana ny famantarana ny kaominina Antananarivo Renivohitra toy ny saina, ny logo, ny fitomboka ary ny « en tête »… avy any amin’ny distrika. Mazava anefa ny fanapahan-kevitry ny sefo fokontany sy ny kaominina raha ny tapaka omaly nandritra ny fihaonana.
Nanambara koa ny sefo distrika fa ny voasoratra ihany no tokony arahina. Mety hisy naoty hilatsaka avy any amin’ny minisitera ary mbola hiresaka amin’ny kaominina ny minisitera, raha ny fanazavan’ny distrika ihany.